किन रन्थनियो इन्द्रावती र मेलम्ची बजार डुबायो? « AayoMail
किन रन्थनियो इन्द्रावती र मेलम्ची बजार डुबायो?
गजेन्द्र बोहरा /सिर्जना घिमिरे
सिन्धुपाल्चोक मेलम्चीका मोहन गिरी ६६ वर्षका भए। यसअघि उनले आफ्ना छेउछाउका खोलामा यतिविधि पानी देखेका थिएनन्।
पानी पनि पानीजस्तो कहाँ! लेदोमात्रै बगेर आएको। मंगलबार दिनभरि पनि पानी परिरहेको थियो। बजारको काखैबाट बग्दै जाने इन्द्रावती नदी धमिलिइसकेको थियो। साँझ छिप्पिँदै गर्दा बजारभरि लेदो मिसिएको पानी पस्न थाल्यो। इन्द्रवतीले पानी थेगेन। त्यो वस्तीमा घरघरै पस्न थाल्यो।
प्रहरीले सचेत गराएपछि मानिस घर छोडेर निस्किएका थिए। रात छिप्पिँदै जाँदा धेरैजना इन्द्रावतीमा बग्दै आएको त्यो लेदो पानीमा बगेर वेपत्ता भए। बिहानपख ७ जनाको मृत्यु पुष्टि भयो। ती मेलम्ची खानेपानी आयोजना तथा अरु विकासे आयोजनामा काम गर्दै आएका भारतीय र चिनियाँ मजदूर हुन्। उनीहरू बसेको क्याम्प नै बाढीले बगायो। धेरैजना सम्पर्कबिहीन छन्।
७२ वर्षका अर्का एकजना स्थानीयले अहिलेसम्म इन्द्रावतीको त्यो रुप देखेका थिएनन्।
‘म जन्मेको नै यहीँ हो। यसैको छेउमा हो’ उनले भने ‘मैले कहिल्यै यस्तो देखिनँ। इन्द्रावती यस्तो थिएन’ उनले भने ‘खै कसरी आयो। यी हाम्रा सारा आफन्तको घरजमिन बगायो।’
उनले अहिले देखेजस्तो इन्द्रावतीको रुप अघिल्ला वर्षहरूमा सायदै थियो।
किन रन्थनियो इन्द्रावती?
मेलम्ची आसपासमा आइपुग्दासम्म इन्द्रावती एक्लै बग्दैन। धेरै माथिमाथिबाट उसले सयौं खहरे–खोलाहरूको साथ पाउँछ र तल्लो तटीय किनारसम्म आइपुग्दासम्म इन्द्रावती अझ विशाल हुन्छ।
सिन्धुपाल्चोकको अधिकांश क्षेत्र अझ विशेषगरी मेलम्ची बजारतिर त हिमालयन चट्टान(बलौटे खालको) माटो छ। यो निकै संवेदनशील हुन्छ।
खासमा अरु समयमा बग्ने समान्य पानी भन्दा लेदो मिसिएको पानी निकै शक्त्तिशाली हुन्छ। त्यसले किनारालाई खियाउँदै लैजान्छ।
‘यस्तो पानी धेरै शक्त्तिशाली हुन्छ। नदीखोलामा बग्दै जाँदा त्यसले छेउकुना खियाउँदै जान्छ। वरीपरीको जमिन, माटो काट्दै जान्छ’ वरिष्ठ भूगर्भविद् शिब बास्कोटाले भने ‘तर, सायद नदी बग्दै आउने ठाउँतिर विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका हुनसक्छन् वा कतै पहिरो खसेको हुनसक्छ। त्यसैले त्यसमा लेदो मिसियो।’
स्थानीयका अनुसार सुरुमा लार्के खोलामा बाढी देखिएको थियो। त्यो खोला इन्द्रावतीको मुख्य सहायक हो।
बाढीले खहरे थुनिँदा
बाढी पसेर बिथोलिएको मेलम्ची आसपास निरीक्षण गर्न पुगेका स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङले सार्वजनिक गरेको एउटा भिडियोमा मेलम्ची बजारभन्दा माथितिर ठूलो पहिरो गएको देखिएको छ। उनले अरु पनि धेरै ठाउँहरूमा पहिरो गएको बताएका छन्।
हेलम्बु गाउँपालिकाको चोक्पुभन्दा ५ सय मिटरमाथि पहिरो गएको तामाङले बताएका छन्। उनका अनुसार ती पहिराहरूले त्यहाँको खोला अनि नदीको बहाव रोकेका छन्।
ती खोलाहरू घरी खुल्छन् र घरि थुनिन्छन्। खुल्दा नदीमा बाढी झन् बढ्छ।
मन्त्री तामाङले मेलम्ची आसपास र इन्द्रावतीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा जोखिम नहटेको र अझै सचेत रहन स्थानीयलाई आग्रह गरेका छन्। उनले त्यहाँ उद्धारमा खट्न मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन पनि दिएका छन्।
नेपाली सेनाले पनि हेलिकोप्टर तथा स्थलगत उद्धार गरिरहेको सैन्य प्रवक्त्ता सन्तोष बल्भव पौडेलका अनुसार सेनाको टोली पनि हेलिकोप्टरबाट त्यहाँका विभिन्न ठाउँमा पहिराहरूको निरीक्षण गरेको छ।
‘तर यी फ्याक्टरहरूमात्रै नभएर अरु पनि थुप्रै कारण हुनसक्छन्’ भूगर्भविद बास्कोटा भन्छन् ‘यसपालि डढेलो पनि धेरै लागेको थियो। त्यसबाट बुट्यानहरू नाशिए। तिनले केही न केही भएपनि माटो समाइराखेका हुन्छन्। त्यसले पनि धेरै थेग्रान भएको हुनसक्छ र पानीमा लेदो बढेको हुनसक्छ।’
पूर्व–सूचना नै थिएन
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार सिन्धुपाल्चोकको सेर्माथाङ भन्ने ठाउँमा जिल्लाभरकै सबैभन्दा धेरै २९.४ मिलिमिटर वर्षा भएको छ। त्यस्तै धाप भन्ने ठाउँमा १०.४ मिलिमिटर पानी परेको छ। यो मंगलबार बिहान ८.४५ देखि बुधबार बिहान ८.४५ बजेसम्मको रेकर्ड हो।
बितेको चौबिसघण्टामा देशभरि सबैभन्दा धेरै पानी अर्घाखाँचीको ठाँटीकोट भन्ने ठाउँमा २०१.७ मिलिमिटर पानी परेको थियो।
मेलम्ची नदी र बलेफी खोलामा बाढी नाप्नका लागि मेसिन पनि राखिएको थियो। तर एकाएक उर्लिएको बाढीले त्यो पनि बगाइदियो। विभागका प्रवक्ता विक्रम श्रेष्ठका अनुसार बाढी ६ मिटरभन्दा माथि नै उर्लिएर आयो तर त्यो मेसिन ५ मिटरसम्म मात्रै थियो।
त्यसले पनि तल्लो तटीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना दिन सकिएन। जसका कारण मेलम्ची बजारका मानिस पहिला नै सुरक्षित स्थानमा जान सकेनन्।
यद्यपि असार १ गते बिहानै बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले एउटा बुलेटिन जारी गर्दै देशभरिका विभिन्न खोला तथा नदीहरूमा बाढी आउने प्रक्षेपण गर्दै सचेत रहन अनुरोध गरेको थियो।
नभन्दै राति सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजारमा बाढी पस्यो। किनारामा बनेका अग्लाअग्ला घरहरू डुबाउँदै इन्द्रावती नदी बेतोडले बढिरह्यो। घरहरू डुबे। बिहानसम्ममा ५० जनाभन्दा बढी मानिस वेपत्ता भए। अपराह्नसम्ममा स्थानीय प्रशासनले ७ जनाको मृत्यु पुष्टि गर्‌यो।
‘खोला नदीले त आफ्नो ठाउँ खोजिहाल्छ नि। हामी मानवका क्रियाकलापकै कारण यस्ता विपदहरूले धेरै क्षति पुर्‌याउन थालेका छन्’ भूगर्भविद बास्कोटा भन्छन् ‘सक्दै नसके खोला नदीले आफ्नो धार फेर्छ। सकेसम्म जे छ त्यसलाई पन्छाउँदै, काट्दै अघि बढ्छ। सत्य यही हो।’
खानी तथा भूगर्भ विभागले बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा त्यहाँको भौगोलिक अवस्थाबारे अध्ययन गर्दै आएको छ। भूकम्पपछि पनि सिन्धुपाल्चोकको भूस्थितिबारेमा धेरै अध्ययन भएका छन्। सबैजसो अध्ययनले निकालेको निष्कर्ष एउटै हो– यहाँको जमिन कमजोर छ। बाढीपहिराको जोखिम र प्रभाव त छँदैछ।
‘त्यसमा पनि अहिले जहाँ बाढी पसेको छ। जहाँ पहिरो गएको छ ती ठाउँ त संवेदनशील नै थिए’ वास्कोटाले भने।